ခင်မင်းဇော်: အော်စလို မှာ (၂)
ထုဆစ်ထားတာတွေကတော့ လုံးဝ အံ့မခမ်းပဲ.. ကလေးကို လက်ကဆွဲပြီး သားအဖနှစ်ယောက် ကစားနေတဲ့ အရုပ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ.. မရောက်ဖူးတဲ့နေရာ ဒေသကို ဝေမျှတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ။
ဟီး ကိုယ်တုံးလုံး ပန်းခြံကိုလည်လည်လာသွားတယ်။
သားသားရှက်ရှက်။ (ကိုယ်တုံးလုံးက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မထုထားပါဘူး) :p
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုမထားပေမယ့် ဖြည့်တွေးလိုက်မလို့ ရှက်သွားတယ်.... အဲငှယ်...
ဒီလိုမျိုး ပုံတွေဘာတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပါအစ်မရယ်...။
ပုံတွေက များလွန်းလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံတွေ မတင်တော့တာ တီဇက်အေ.. ဟမ်းးးးးး
အေးလေ..ဒီလောက် အေးရတဲ့အထဲ အ၀တ်လဲ ပါဘူး :)
ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ အရမ်းကောင်းမယ့် နေရာပဲနော်.. ဒီထက်မက အများကြီး ရိုက်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား အမ။
သွားလည်ချင်တဲ့ တစ်နေရာ တိုးလာပြန်ပြီ...
သိသလောက်တော့ အဲ့ဒီ့ပန်းခြံက ..နော်ဝေက ပန်းပုဆရာကြီး Gustav Vigeland သေသွားတော့ သူထုထားခဲ့တဲ့ ပန်းပုရုပ်တွေကို ဒီပန်းခြံလုပ်ဖို့လှူခဲ့တာလို့ဖတ်ဖူးတာဘဲ .. နော်ဝေလိုတော့ Vigeland Park လိုခေါ်တယ်တဲ့
My fav. သားကို အမေဖြစ်သူက ဘယ်လိုပြောပြော နားမ၀င်ပေါင် :)
ဓါတ်ပုံတွေ များများတင်ပါဆိုမှ နည်းနည်းလေးတင်တယ်...
စာတွေက နောက်တော့ ထပ်ရေးပေါ့...
ဓါတ်ပုံက တခါတလေမှ ကြည့်ရတာ... ဓါတ်ပုံတွေမြင်ရမှ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားရသလို ခံစားရတာလေ...
စာဖတ်သူတွေနေရာကနေ ခံစားကြည့်ပါဦး... အေ... တကတည်း...း)
Photo Story ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ရင် ရုပ်ရှင်တောင် အရှုံးပေးသွားရဦးမှာ...
Thanks for sharing. I haven't been to nordic countries.
ဟိ..ဗမာတွေက..နံမယ်ပေးတာတော့ ကွတ်တိပဲ။ သဘောကျတယ်။
လှလိုက်တာ အစ်မရယ်.. အဲ ဓါတ်ပုံတွေ လှလိုက်တာ။
ဆရာကြီး Gustav Vigeland ပန်းခြံခမျာမှာ ဗမာနဲ့တွေ့မှ အကျီင်္ပါ မရှိ ဖြစ်ရရှာတယ်။ ကင်းပွန်းတပ်တာ ထိရောက်ပါပေတယ်။
It is naked park